MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Data Carry Auto Renewal Packs mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
သင်ဟာ မိုဘိုင်းဒေတာအသုံးပြုတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒေတာပက်ကေ့ချ်တွေဝယ်သုံးရတဲ့အခါ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်က ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ဒေတာပက်ကေ့ချ်တစ်ခုကိုပဲ ကုန်သွားတိုင်း မကြာခဏပြန်ဝယ်ရလေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်မက အရမ်းအလုပ်များတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ Mobile Data ကိုလည်းအချိန်တိုင်းဖွင့်ထားပြီး အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝယ်ထားတဲ့ ဒေတာပက်ကေ့ချ်တွေက မကြာခဏကုန်သွားတတ်တော့ ဒေတာပက်ကေ့ချ်တွေကို တစ်ပတ်/တစ်လအတွင်း ခဏခဏဝယ်သုံးနေရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။
ကျွန်တော်က မိုဘိုင်းဒေတာကို 24/7 ဖွင့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒေတာပက်ကေ့ချ်က ဒေတာတွေကုန်သွားတဲ့အခါ ကျွန်တော်သတိမထားမိလိုက်ဘဲ သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားနဲ့ ဒေတာတွေခဏခဏသုံးမိနေတတ်ပါတယ်။
တကယ်လို့အပေါ်မှာပြောပြထားတဲ့အခြေအနေတွေထဲက တစ်ခုခုက သင်နဲ့ ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင်တော့ MPT မှာအဖြေရှိပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားသော Data Carry Plus packages များကို အလိုအလျောက်ဝယ်ယူရန် အဆိုပြုထားပြီး လက်ကျန်ပမာဏ 50 MB အောက်လျော့နည်းသောအချိန်တွင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံရွေးချယ်ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ဘဲ အလိုအလျောက်ဝယ်ယူသက်တမ်းတိုးပေးသွားမည့် ပက်ကေ့ချ်များဖြစ်ပါတယ်။
အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးနိုင်ခြင်းက သင့်အခက်အခဲများကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေအပြင် သုံးမကုန်တဲ့ဒေတာတွေကို သယ်ယူသွားနိုင်ခြင်းနှင့် Lucky Data 1000GB အထိကံစမ်းရယူနိုင်ခြင်းတို့ကလည်း အသုံးပြုသူတွေအတွက်အလွန်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေမှာပါ။
ပုံမှန် Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်များကဲ့သို့
1000 GB အထိ lucky data များ ကံထူးနိုင်မည့်
‘Data Carry Plus Auto Renewal’ကိုဝယ်ယူပြီးနောက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးမျိုးတွေရရှိနိုင်မှာပါလဲ?
ဝယ်ယူထားတဲ့ဒေတာပက်ကေ့ချ်တွေကို အားလုံးအသုံးပြုပြီးသွားတဲ့အခါ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဒေတာပက်ကေ့ချ်ကို အကြိမ်များစွာရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့အတွက် အလုပ်ရှုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
Data Carry Plus Auto Renewal’ packကို ဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက် သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်နဲ့အသုံးပြုမိလို့ သင့်လက်ကျန်ဖုန်းဘေလ်တွေအမြန်ကုန်သွားမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
အလုပ်များတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း 24/7 ဒေတာအမြဲဖွင့်ထားရင်တောင် ဒေတာပက်ကေ့ချ်ခဏခဏပြန်ဝယ်ဖို့မလိုအပ်ဘဲ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပေးသွားမှာဆိုတော့ အရမ်းအဆင်ပြေစေမှာပါ။
‘Data Carry Plus Auto Renewal’ Packကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပက်ကေ့ချ်တွေထဲက မိမိနှစ်သက်ရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကာ USSD နံပါတ်ကို ခေါ်ဆို၍ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဒေတာပက်ကေ့ချ်များကို အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
၉၇၉ ကျပ် 905MB *777*3*3#
၁၂၇၉ ကျပ် 1180MB *777*4*3#
Data Carry Plus Auto Renewal ပက်ကေ့ချ်အတွက် ဘာတွေသိဖို့လိုအပ်ပါသလဲ?
၁။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးData Carry Plus Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
Quota အမျိုးအစားတူသော Auto renewal packs များကို အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ် ပြီးျား ပေါင်းစည်းသွားမည့်အပြင် ပက်ကေချ့်သက်တမ်းကို အရှည်ဆုံးပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပက်ကေ့ချ်၏လက်ကျန် ဒေတာပမာဏ 50MB အောက်ရောက်ရှိသွားချိန်တိုင်း အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုး ဝယ်ယူပါမည်။
Regular Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူပြီး Auto renewal Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ် ထပ်မံ ဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ၊ Auto renewal Data Carry ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူပြီး Regular Data Carry ပက်ကေ့ချ် ထပ်မံဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ ပက်ကေ့ချ်များကို အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဒေတာပမာဏများ ပေါင်းစည်းသွားမည့်အပြင် အရှည်ဆုံးပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်။ ပက်ကေ့ချ်၏ လက်ကျန် ဒေတာပမာဏ 50MB အောက်ရောက်ရှိသွားချိန်တိုင်း အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုး ဝယ်ယူပါမည်။
၂။ ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ အသုံးမပြုရသေးတဲ့ ဒေတာတွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာလဲ?
၃။ ဘယ်အချိန်မှာ Auto Renew Function လုံးဝရပ်တန့်သွားမှာလဲ?
သုံးစွဲသူမှ ပက်ကေ့ချ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ဒေတာသယ်ဆောင်နေသောကာလ(၇ရက်အတွင်း) တိုင်အောင် ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်း မရှိပါက Auto Renew Function ကို ဆက်လက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူမှ service ကို ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက ထပ်မံဝယ်ယူပြီးမှ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄။ အလိုအလျောက်ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းတိုးရာ၌ လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ?
MPT သုံးစွဲသူများအတွက် လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်စေရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Auto Renewal Data Carry Plus (‘အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး’) ပက်ကေ့ခ်ျဆိုတာ ဒေတာများကို အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးစနစ်ပါဝင်သည့် ပက်ကေ့ချ်ဖြစ်ပါသည်။
Autorenewal Data Carry Plus Pack နှုန်းထား
979 Ks 905 MB
1,279 Ks 1,180 MB
၂။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး ပက်ကေ့ခ်ျများ၏ သက်တမ်းမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ?
ပက်ကေ့ခ်ျများ၏ သက်တမ်းမှာ အဆိုပြုဝယ်ယူပြီးသည်မှစ၍ ရက်(၃၀)ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးရန် အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ?
a. *777*3*3# (905MB with 979Ks)
b. *777*4*3# (1180MB with 1279Ks) ကိုခေါ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်ရယူနိုင်ပါသည်။
၄။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး ပက်ကေ့ခ်ျ က ဘယ်အချိန်မှာ သက်တမ်းတိုးမှာပါလဲ?
အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်ကို အဆိုပြုဝယ်ယူပြီးသည့်နောက် ရက်(၃၀)အကြာတွင်(သို့)ရက်(၃၀) မတိုင်ခင် ဒေတာလက်ကျန်50MB(သို့) 50MBအောက်ရောက်ရှိသောအချိန်တွင် Autorenewal Pack သည် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး Auto Renewal Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid and postpaid အသုံးပြုသူများ နှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်း မရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၆ ။ ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းများမှာ အခွန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသလား?
၇။ ဒေတာအသုံးပြုရာတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိပါသလား။
မရှိပါ။ မည်သည့်၀န်ဆောင်မှုအတွက်မဆို Autorenewal Packများ၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
၈။ ယခင် အစီအစဉ်ရယူမှုတွင် အသုံးမပြုရသေးသော လက်ကျန်ဒေတာများ မည်သို့ဖြစ်သွားမှာပါလဲ?
a.အစီအစဉ်ရယူပြီးသည့်နောက် ရက်(၃၀)မတိုင်ခင် လက်ကျန်ဒေတာ 50MB(သို့)50MBအောက်ရောက်ရှိသော အချိန်တွင် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အသုံးမပြုရသေးသော/လက်ကျန်ဒေတာများသည် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပက်ကေ့ချ် နှင့်ပေါင်းစည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ။ X လအတွင်း ၂၅ရက်နေ့တွင် သင်၏ လက်ကျန်ဒေတာ 40MB ရှိနေပါက ၂၅ရက်နေ့တွင် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်ရှိနေသော40MBသည် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး ပက်ကေ့ချ်နှင့်ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
b.သင်သည် 50MB(သို့)50MBထက်ပိုများသောလက်ကျန်ဒေတာများကျန်ရှိနေသော်လည်းပက်ကေ့ချ်သက် တမ်းရက်(၃၀)ကုန်ဆုံးသည့်အချိန်တွင် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုရသေးသော လက်ကျန်ဒေတာများသည် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပက်ကေ့ချ်အသစ်နှင့်ပေါင်းစည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ။ X လအတွင်း ရက် (၃၀) သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးသည့်အချိန်တွင် ၉၇၉ကျပ် ပက်ကေ့ချ်မှ ဒေတာ လက်ကျန် 50MB အထက်ကျန်ရှိနေသော်လည်း ဒေတာပမာဏတူညီသော ၉၇၉ကျပ် ပက်ကေ့ချ် အသစ်ကို ထပ်မံဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး၊အသုံးမပြုရသေးသောပထမပက်ကေ့ချ်၏လက်ကျန်ဒေတာများသည်ထပ်မံ ဝယ်ယူ သော ၉၇၉ကျပ်ပက်ကေ့ချ်အသစ်နှင့်ပေါင်းစည်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
c. သင်သည် 50MB(သို့)50MB ထက်ပိုသော လက်ကျန်ဒေတာများကျန်ရှိနေပြီး ရက် (၃၀) သက်တမ်း မကုန်ဆုံးခင် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးရန် လက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်ပါက MPT မှ အသုံးပြုသူများကို ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်တိုင်အောင် ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းတိုးရန် စောင့်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ၇ရက် အတွင်း ပမာဏတူညီသော Auto Renewal Pack ကို ဝယ်ယူပါက ဒေတာလက်ကျန်များကို ထိုပက်ကေ့ချ်နှင့်အတူ ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်မည်။ သုံးစွဲသူမှ ပက်ကေ့ချ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး နောက်(၇)ရက်တိုင်အောင် ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်း မရှိပါက ဒေတာလက်ကျန်များ ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ် သည်။
ဥပမာ။ သင်သည် ရက်(၃၀)သက်တမ်းဖြင့် ၉၇၉ကျပ် ပက်ကေ့ချ်ကိုဝယ်ယူထားရာ 50MBထက်ပိုသော လက်ကျန်ပမာဏကျန်ရှိနေပြီး အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးရန် လက်ကျန်ငွေ မလုံလောက်ပါက ၉၇၉ကျပ် ပက်ကေ့ချ် သည် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးမည်မဟုတ်ပါ။
ပက်ကေ့ချ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်တိုင်အောင် ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းတိုးရန် စောင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး
၇ရက်အတွင်း ၉၇၉ကျပ် ပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူသည့်အခါ ဒေတာလက်ကျန်များကို ထိုပက်ကေ့ချ်နှင့်အတူ ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်မည်။
၉။ ၉၇၉ကျပ်တန် Auto Renewal Pack ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ရက်(၃၀)တွင် အသုံးမပြုရသေးသော /လက်ကျန်ဒေတာများ ကျန်ရှိနေပါက ၁၂၇၉ကျပ်တန် Auto Renewal Pack ကို ဝယ်ယူပြီး လက်ကျန်ဒေတာများ ကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသလား?
မရနိုင်ပါ။ ဒေတာပမာဏ တူညီသော Auto Renewal Pack ကို ဝယ်ယူမှသာ လက်ကျန်ဒေတာများ သယ်ယူသွားနိုင် ပါမည်။ ၉၇၉ကျပ်တန် Auto Renewal Pack ဖြစ်ပါက လက်ကျန်ဒေတာများ သယ်ယူရန်အတွက် ၉၇၉ကျပ်တန် ကိုသာ ဝယ်ယူပြီး၊ ၁၂၇၉ ကျပ်တန် Auto Renewal Pack ဖြစ်ပါက ၁၂၇၉ ကျပ်တန် ကိုသာဝယ်ယူပြီး လက်ကျန်ဒေတာများသယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
၁၀။ လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
၁၁ ။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး Auto Renewal Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး Auto Renewal Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာပမာဏများ ပေါင်းစည်းသွားမည့်အပြင် နောက်ဆုံးပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်။
၁၂။ ၉၇၉ကျပ်တန်နှင့် ၁၂၇၉ ကျပ်တန် Auto Renewal Pack ၂မျိုးစလုံးကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အစီအစဉ်ရယူပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
မရနိုင်ပါ။ ဒေတာပမာဏတူညီသောAuto Renewal Packကိုသာလျှင် အကြိမ်အရေအတွက် အကန့် အသတ်မရှိ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ။ ၉၇၉ကျပ်တန် Auto Renewal Packကို အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်ရယူပြီးပါက၊ ၁၂၇၉ ကျပ်တန် Auto Renewal Packကို အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၃။ အခြား ဒေတာပမာဏချင်း မတူညီသော Auto Renewal Pack ကိုဝယ်ယူလိုပါက ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရပါသလဲ?
ဒေတာပမာဏ မတူညီသော ပက်ကေ့ချ်အသစ်ကို ဝယ်ယူလိုပါက လက်ရှိ အစီအစဉ်ရယူထားပြီးသော Auto Renewal Pack အား ဉီးစွာ (UNSUBSCRIBE) ပယ်ဖျက်ပြီးမှသာလျှင်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၉၇၉ကျပ်တန် Auto Renewal Packကို အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်ရယူထားပြီး နောက်တစ်ဆင့်မြင့်သော ၁၂၇၉ ကျပ်တန် Auto Renewal Pack အား အစီအစဉ်ရယူလိုပါက အရင်ဆုံး ၉၇၉ကျပ် တန် Auto Renewal Packကို အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်မှ ပယ်ဖျက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၄။ သောကြာနေ့တွင် Auto Renewal Pack ဝယ်ယူပါက ဘယ်လိုခံစားခွင့်တွေရှိမှာပါလဲ?
သောကြာနေ့တွင် Auto Renewal Pack ဝယ်ယူပါက Happy Friday အပိုဆောင်း ဒေတာ (MBs) များရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ Auto Renewal Pack တစ်ခုအား အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်ရယူပြီးဝယ်ယူသောအခါ အခြားမည်သည့်အရာများ ပါဝင်နိုင်ပါသေးလဲ။
Auto Renewal Pack တစ်ခုအား ဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် Lucky Data Bonus 1000GB အထိ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၆ ။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်ရယူရာတွင် Lucky Data ရရှိနိုင်ပါသလား။
ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်ရယူမှုတိုင်းအတွက် Lucky Data ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၇။ Lucky Data ၏ သက်တမ်းရှိပါသလား။
ရှိပါတယ်။ ကံထူးထားသည့်ဒေတာကို အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသည့်ရက် (သို့မဟုတ်) Auto Renewal Pack အသစ် ဝယ်ယူသည့်ရက်မှ စ၍ (၇)ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ (၇)ရက်သက်တမ်းပြီးနောက်တွင် Lucky Data သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၈။ အသုံးမပြုရသေးသော Lucky Data များကို ဘယ်လိုအချိန်တွင် ပေါင်းစည်းသယ်ယူသွားနိုင်ပါသလဲ။
Lucky Data (၇)ရက်သက်တမ်း မတိုင်ခင် စျေးနှုန်းတူညီသော Auto Renewal Pack ကို နောက်တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူပါက အသုံးမပြုရသေးသော Lucky Dataများ အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပက်ကေ့ချ်၏ Lucky Data သက်တမ်းအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်မည်။
၁၉။ Lucky Data အားလုံးအသုံးပြုလိုက်ပါက Auto Renewal Pack ၏ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်း အား ရရှိနိုင်ပါသလား။
မရရှိနိုင်ပါ။ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းသည် ကံထူးထားသည့်ဒေတာများ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားခြင်း (သို့မဟုတ်) သုံးစွဲ၍ ကုန်ဆုံးသွားခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
၂၀။ Auto Renewal ပက်ကေ့ချ် များကို ဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်း နိုင်ပါသလား?
၂၁။ Auto Renewal Data Carry Plus ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပါသလား?
၂၂။ အလိုအလျောက်ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းတိုးရာ၌ လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ?
ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၇)ရက်အတွင်း ငွေဖြည့်/ချေးငွေလက်ကျန်ငွေ/ငွေလက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်းရန် ပျက်ကွက်ပါကရွေးချယ် ဝယ်ယူထားသော Autorenewal Pack သို့ ပယ်ဖျက်ကြောင်း SMS ဖြင့်အကြောင်းကြား လိမ့်မည်။
၂၄။ Auto Renewal ပက်ကေ့ချ် အဆိုပြုဝယ်ယူခြင်းအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသလား?
a. *777*3*4# (905MB with 979Ks)
b. *777*4*4# (1180MB with 1279Ks) ကိုခေါ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
၂၅။ အဆိုပြုဝယ်ယူခြင်းအား ပယ်ဖျက်ပြီးပါက ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ?
Auto Renewal ပက်ကေ့ချ် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၆။အဆိုပြုဝယ်ယူခြင်းအား ပယ်ဖျက်ပြီးနောက်Auto Renewal Pack၏လက်ကျန်ဒေတာများကိုသုံးနိုင်ပါသလား?
လက်ကျန် ကျန်ရှိနေသော Data ကို ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။